Nepali Rajneeti | राउटे बस्तीमा आईलाग्यो ठुलो समस्या, १८ राउटेको मृ’त्यु ! एक महिनामै सात स्थानमा बसाइँसरार्इ
अषोज ४, २०७८ सोमबार १५१ पटक हेरिएको
कर्णाली : चिसो भुइँमाथि पातलो खु’इलिएको म्याट ।
बुढ्यौलीले शरीर दिनप्रतिदिन चाउरिँदैछ । शरीर ढाक्ने कपडा छ न पानीबाट ओत लाग्ने गतिलो छाप्रो नै ।
८९ वर्षीय राउटे कर्णबहादुर शाहीका दुःख यतिमात्र छैनन्, उहाँलाई लामो समयदेखि हाडजोर्नी दुख्ने समस्याले सताएको छ । अरुको साहारा बिना उठबस गर्न सक्नुहुन्न ।
फिरन्ते राउटे समुदाय पहिले डाक्टरी उपचारमा त्यति विश्वास गर्थेनन् तर पछिल्ला केही वर्षयता भने उनीहरुको यो धारणा क्रमशः बदलिएको छ ।
कर्णबहादुरले पनि शुक्रबार बस्तीमा पुगेको एक सरकारी टोलीसँग उप’चारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । “बिमारले थलिएको धेरै भइसक्यो, औषधि–उप’र पाए हुन्थ्यो”, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना नेतृत्वको टोलीसँग भन्नुभयो, “जीउ दुखेर हैरान बनायो, औ’ष’धि खा’ए निको हुन्थ्यो की ? डाक्टरलाई यतै (बस्तीमै) पठाइदिनुप¥यो ।”
अधिकांश राउटेका हाटखुट्टामा घा’उ–खतहरु छन् । ३० वर्षीय पे्रम शाही दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा अटोरिक्सा प’ल्टिँदा घाइते हुनुभयो । उहाँको दायाँ खुट्टामा ग’म्भी’र समस्या छ ।
दुर्घ’टनालगत्तै उहाँले स्थानीय मेडिकलमा उप’चार गराउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीले ह’ड्डी भाँ’च्चि’एको बताएपछि ड’र लागेर उपचार नगराएको उहाँले बताउनुभयो । पे्रमलाई पनि अरुको साहाराबिना लामो यात्रा गर्न मुस्किल पर्छ । त्यस्तै, १२ वर्षीय बपिल शाही केही दिनअघि सल्यानको बालुवाग्राहीमा लडेर घाइते हुनुभयो । उहाँको दायाँ हातको कुइनामा चो’ट लागेको छ ।
राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का (अधिकारी) ले राउटेको उपचारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
“भत्तामात्र बाँडेर राज्यले राउटेप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बिरामीलाई बस्तीबाट अस्प’तालमा पु¥याउने, उपचारका लागि काउन्सिलिङ गर्न उनीहरुले विश्वास गर्न सक्ने मान्छे कुरुवा बस्नुपर्छ, अन्य जाति जस्तो राउटेको उप’चार गर्न सजिलो छैन् ।”
गत वर्ष मङ्सिरदेखि यता १८ राउटेको मृ’त्यु भइसकेको छ । पछिल्लो समय मयो शाही, दलबहादुर शाही, मानसिं शाही, शिवराज शाही, कान्छाराम शाही, कपिल शाहीको मृ’त्यु भएको जनाइएको छ । अ’त्य’धि’क मा’प’से कारण अकालमा धेरै राउटेको ज्या’न गइसकेको छ । एकातिर मा’प’से अर्कोतिर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्दा मृ’त्युदर बढेको बताइएको छ । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि राउटेहरु बर्सेनि घट्दो सङ्ख्यामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
प्राणीशास्त्री समेत रहनुभएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले राउटे वंशको सुरक्षा महत्वपूर्ण सवालका रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
“राउटे संस्कार, संस्कृति संरक्षण गर्न नसके अस्तित्व हराउन धेरै वर्ष पर्खनुपर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राउटे वंश, संस्कृति, बेग्लै भाषा भएको दु’र्लभ मानव जाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नु दु’र्भा’ग्य हो ।” आफ्ना समुदायका सदस्यको मृ’त्यु हुनासाथ बस्ती छाड्ने प्रचलनका कारण यो समुदाय छिटो–छिटो बसाइँ सर्नुपर्ने बा’ध्यतामा छ । पछिल्लो एक महिनामै उनीहरु सात स्थानमा बसाइँ सरिसकेका छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।